Event – Page3– Education Foundation
Education Foundation > Archive for Event (Page 3)
This is event category
BEAM/JUMP! လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ – The Rising Lanterns of Chiang Mai
October 3, 2016 beam-admin
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅-၆ ရက်နေ့များ၌ ဘီမ်းပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် JUMP! ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင်နေထိုင်ကြသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူငယ်များအား လူငယ်အခြေပြု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် ပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားသည့် စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်မှုပေါ်ထွန်းလာစေရန်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများအား စုပေါင်း အဖြေရှာမှု အတွေ့အကြုံများအတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှ လူငယ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး အထူးသဖြင့် အခွင့်အရေးနည်းပါး၍ ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်သူ လူငယ်များအတွက် ကောင်းကျိုးများဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအပြင် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်များ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ Read More …
Youth Conference, BEAM/JUMP Leadership Conference: The Rising Lanterns of Chiang Mai
September 29, 2016 September 29, 2016 beam-admin
On 5-6, November 2016, BEAM Education Foundation will organizeatwo-day youth conference in collaboration with the JUMP! Foundation. The conference aims to inspire, empower and engage Burmese migrant youth living in Chiang Mai, Thailand, as well as, to collectively Read More …
Food4futures: BEAM Fundraising
June 10, 2016 September 24, 2016 beam-admin
Spend an evening exploring the culture of Myanmar overaFive Course Meal, with each course coming fromadifferent Burmese district. In addition to the meal, there will be; (1) Live cultural performances, (2) Hand-made gifts, (3) Raffle prizes Read More …
BEAM’s Bridging Programs for Higher Education Opening (2016-2017)
April 10, 2016 June 10, 2016 beam-admin
BEAM’s Bridging Programs for Higher Education Opening (2016-2017) BEAM Education Foundation is now opening the student recruitment for its two bridging programs for higher education: Integration Program and the GED Program for 2016-2017 academic year. The integration program aims to Read More …